Heino zano rimwe rako, Microsoft Clipart is chaizvo vector yakavakirwa uye unogona kushanda nayo mu Illustrator. Icho hunyengeri kuendesa kunze clipart mune yeMicrosoft application iyo inobvumidza iwe kutumira kunze clipart mune fomati iri Illustrator-inoshamwaridzika Microsoft Visio chimwe chigadzirwa chakadai.
Nov 29, 2007 na7:35 PM
Ndinozvipa 9 kunze kwe10. Hazvina kushata kune yemifananidzo hack uchishandisa clipart. 😉
Kunyangwe, ini ndinofunga iwe unofanirwa kufambisa mumvuri padhuze nekapu, saka iwe unodzivirira iyo UFO-inoyangarara yekofi kapu kutarisa.
Nov 29, 2007 na8:21 PM
Iva nechokwadi chekutarisa Monon Coffee Company kana uri munzvimbo yeBroad Ripple. Iri mukati memwoyo weBroad Ripple uye inopa hushamwari, hushamwari. Pamusoro pazvo zvese, vaviri vevaridzi vanhu vandinoshanda navo kuWild Birds Unlimited! Ndeipi iyo yekubatanidza?!
Basa rakanaka murume! Ndingadai ndakazvikudza kuti ndauya nazvo.